Ama-Gearmotors - Thola ku-Inthanethi
Thola ku-Inthanethi Novemba 13, 2019 Imoto etholiwe, Akuhlukaniswe Awekho amazwana
Ezinye izinto: Amaqembu eWhatsapp Ama-Slimming Shakes Slimming Juices Abdominoplasty Gastric Sleeve Whatsapp Amaqembu I-Flirt Download Minecraft Pocket Edition Vaginal Irritation Ingabe ekuseni ngemuva kwephilisi kubambezeleka…
Imoto yamanje iyaqhubeka; izinhlobo nezingxenye
Thola ku-Inthanethi May 13, 2019 Imoto etholiwe Awekho amazwana
I-DC motor ngumshini oguqula amandla kagesi abe umakhenikha. Ngokuyisisekelo kwakhiwa i-stator ne-rotor; ukugcinwa kwalokhu kubiza kakhulu, mayelana ...
I-Gearmotor: Imininingwane kawonkewonke
Thola ku-Inthanethi May 6, 2019 Imoto etholiwe Awekho amazwana
I-motor eyenzelwe isigaba esisodwa noma yehlise ijubane yenziwa ngokususelwa kumagiya; ngezinqubo ngokuya ngosayizi nemisebenzi yenjini. Lokhu kusungulwa kuvela ngaphezu kwe ...
Isebenza kanjani imoto kagesi
Thola ku-Inthanethi March 13, 2019 Imoto etholiwe Awekho amazwana
Kulesi sikhala sizochaza ukuthi imoto kagesi isebenza kanjani. Ukuze senze lokhu, kufanele sicacise incazelo yalo kanye nokusetshenziswa kwayo. YINI INDLELA YOKUKHETHA Okokuqala, a…
I-Synchronous motor: yazi umshini kagesi omangalisayo
Thola ku-Inthanethi February 18, 2019 Imoto etholiwe Awekho amazwana
Umshini weSychchousous noma umshini wokuvumelanisa ukuguqulwa kwamandla kagesi kube amandla emishini. Kubhekwe njengenye yamanje, enejubane ngaphansi kwezimo ezinesigaba esilinganayo esilinganayo ...
Ukusebenza Kagesi Kagesi
Thola ku-Inthanethi February 1, 2019 Imoto etholiwe Awekho amazwana
I-Electric Motors: Ukusebenza Ngaphambi kokuchaza ukusebenza kwama-motors kagesi kungaba lula ukwazi ukuthi iyini imoto kagesi nokuthi ungayikhetha kanjani efanelekile. Kunoma ikuphi ...
Ungayikhetha kanjani isinciphisi sejubane ezinkampanini?
Thola ku-Inthanethi Disemba 26, 2018 Imoto etholiwe Awekho amazwana
Inhloso yokunciphisa ijubane ezinkampanini ukunciphisa ijubane lomshini. Amakhasimende amakhulu wejubane anciphisa izinkampani ezinemishini yezimboni ukuthi…
Kuyini ukusebenza kwe-gearmotor?
Thola ku-Inthanethi Okthoba 25, 2018 Imoto etholiwe Awekho amazwana
Ungathanda ukwazi ukuthi imoto elungiselelwe isebenza kanjani? ETercesa sikutshela ukuthi kuyini ukusebenza kwayo. Kokubili izinciphiso zemishini kanye ne-gearmotor yinye ...
Yini i-gearbox engapheli?
Thola ku-Inthanethi April 13, 2018 Imoto etholiwe Awekho amazwana
Yini i-gearbox engapheli? Isilinganiso sokuphehla segiya sohlobo lokunciphisa i-gearbox eline-inletion inlet, a…
I-Speed ​​Reducer vs. gearbox
Thola ku-Inthanethi March 30, 2018 Imoto etholiwe Awekho amazwana
I-Speed ​​Reducer vs. gearbox Sisanda kuhlangabezana nemibuzo eminingi maqondana nama-gearbox nama-speed anciphisa. Sizozama ukufingqa futhi sibike ngo ...